Portiogey mpihira rap, miteraka adihevitra noho ny fanehoana ny herisetra an-tokantrano ao anatin’ny lahatsary vaovao · Global Voices teny Malagasy
"Mpanankarena mpiaro zon'ny vehivavy" ireo kiana ataony, hoy i Valete
Voadika ny 31 Oktobra 2019 20:55 GMT
Vakio amin'ny teny Deutsch, Español, English, Français, ਪੰਜਾਬੀ, Ελληνικά, bahasa Indonesia, Português
Ilay Portiogey mpihira rap, Valete. Sary:Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
Taorian'ny namoahany lahatsary mampiseho sehatra iray ana herisetra an-tokantrano, niatrika tsikera maro ilay Portiogey Santomeanina mpihira rap mipetraka any Lisbon ankehitriny.
Mampiseho lehilahy iray mitam-piadiana mandrahona ny sakaizany sy ny sipan'ity farany ilay horonantsarin'ny “B.F.F” navoaka tamin'ny 30 Aogositra. Tao amin'ny kaonty YouTuben'i Valete, mihoatra ny iray tapitrisa ny jery azon'ilay lahatsary.
Nanao sonia taratasy misokatra natokana ho an'i Valete ny fikambanana amam-polony maro mpiaro ny zon'ny vehivavy any Portiogaly, nitsikera ny lazain'izy ireo ho toy ny manamaivana ny herisetra an-tokantrano. Toy izao no lazain'ilay taratasy:
Tsy kanto na kolontsaina ny herisetra atao amin'ny vehivavy. Tsy afaka ny ho voaafina ao ambadiky ny famokarana ara-kanto foana ny famerenana mazava ny fankahalana vehivavy sy ny fanamaivanana ny herisetra atao amin'ny vehivavy.
Araka ny Fikambanana Portiogey ho Fanohanana ireo Traboina (APAV), izay manome fanohanana ho an'ireo fianakavian'ny traboinan'ny herisetra tany Portogaly, tamin'ireo 28 trangàna fikasàna hamono olona tamin'ny 2018, 11 no nataon'ny vady na vady nisarahan'ilay niharam-boina.
Manoloana ireo tsikera, namoaka valinteny an-dahatsary izay nandà ireo tsikera ireo i Valete, izay antsoiny hoe “mpanankarena mpiaro zon'ny vehivavy izay tsy mankany amin'ny ambany tananàn'i Lisbon mba hahafantatra ny fiainan'ireo vehivavy miaina eny.”
Ho an'ny gazety Público, nantsoin’ i Valete ho toy ny “poakaty” ilay adihevitra , noforonin'ny “vondrona kely iray ahitàna ireo olomalaza mpiaro ny zon'ny vehivavy” ary mitaky ny fahalalahany ara-kolotoraly amin'ny maha mpamorona azy. “Raha toa ka nampiseho ny mitovy amin'izany tany anaty boky na sarimihetsika aho, mety tsy nisy olana izany.”
Anarana amin'ny maha-mpanakanto an'i Keidje Torres Lima ny hoe Valete, 37 taona. Nanomboka ny asany ara-mozika tany amin'ny taona 1997 izy, namoaka rakikira roa ary niseho tanatin'ny rakikira maro an'ireo mpanakato hip-hop hafa miteny portiogey .
Niteraka fanehoankevitr'ireo vehivavy teny amin'ny tambajotra sosialy izany adihevitra izany. Tao amin'ny pejy Facebook-ny, nitsikera ilay lahatsary ilay vehivavy Portiogey mpikatroka, Marta Sousa e Silva no sady naneho koa ny fanohanany ny fahalalahana ara-kanton'ilay mpanao mozika :
Eritreritra roa no nananako rehefa hitako ilay lahatsary. Ny voalohany hoe “tena vita tsara izy izany”. Ny faharoa hoe “ohatry ny tsy te-haheno izany in-droa aho”.
Diso fanantenana aho. Henoy: Takatro ny maha-hetsika ara-kanto azy ity. Azoko fa fanehoana tantara iray ity hira ity, fa tsy fankasitrahana ilay zavamisy voafaritra.
Fa ny tena marina dia fampiharana izay nitondra AOTRA ho an'ny resaka mikasika ny herisetra mifandraika amin'ny mahalahy na vavy any Portiogaly izany. Satria efa fantantsika tsara izany tantara izany. Tsy zava-baovao izany. Izany no tantara mibahana. Izany no tantara maneho ny lalàna tany aloha, latsaky ny dimampolo taona lasa izay. Hanantena tantara miady amin'ny rafitra efa misy kokoa aho avy amin'i Valete fa tsy ilay efa misy amin'izao fotoana izao.
Na izany aza, misy dikany ve ny fanasivanana ilay mozika? Tsia, leeetie. Mazava ho azy fa tsia. Mitovy dika amin'ny filazàna fa izay rehetra tohina amin'ity dia satria mpanankarena, adala, mpiaro ny zon'ny vehivavy any an-tanàna, na te-hampidi-bola izany.
Farany, ary mifanohitra amin'ny noeritreretiko, nosokafan'ilay asa artistika hatramin'ny fahafahana mifampiresaka. Niteraka fifampikasohana, fifandirana izany ary ao anatin'ny famahana ireo fifampikasohana sy fifandirana ireo no hanimbàntsika ireo rafitra diso ka hanorenantsika fototra mafimafy kokoa. Indrisy, tsy izany no zava-miseho.
Nahitàna fanehoankevitra maro avy tany Mozambika, ny iray tamin'izy ireo avy tamin'i Capito Semente, izay nilaza fa tsy nahita na inona na inona tokony niteraka adihevitra tao anatin'ilay horonantsary izy:
Imbetsaka namerina nijery ny horonantsary BFF an'i Valete aho. Tsy azoko hoe inona no antony himenomenonan'ireo mpiaro ny zon'ny vehivavy mikasika ilay lazainy hoe fitarihana ho amin'ny herisetra amin'ny vehivavy!
Zavatra mahazatra any anaty sarimihetsika izay mamaritra ny herisetra an-tokantrano ny fisehoan-javatra mandona toy ireo mipoitra ao amin'ilay lahatsary. Mahaliana fa ireo mpiaro ny zon'ny vehivavy mitsikera ilay lahatsary ireo ihany no miantehitra amin'ny fisehoan-javatra sahala amin'izany ihany avy amin'ny lahatsary hafa mba hanairana ny saim-bahoaka tsy hanao herisetra any an-tokantranony. Inona no tena heverin'izy ireo fa ratsy be ao anatin'ilay horonantsarin'i Valete?
Nilaza ilay Mozambikàna mpikaroka, Boa Monjane, izay niteny fa manohana ny fiarovana ny zon'ny vehivavy, fa manohana an'i Valete izy satria na tohina tamin'ilay horonantsary aza izy, heveriny fa misy fanararaotana fanavakavahana ara-bolon-koditra amin'ity raharaha ity:
Iray amin'ireo diso fanantenana tamin'ilay hira BFF sy horonantsarin'i Valete aho.
Ankehitriny, hatramin'ny nanararaotana ilay toe-javatra mba hanaparitahana ny fankahalàna, ny fitsaràna an-tendrony sy ireo fanafihana (isan-karazany), mahatonga ahy hanohana azy izany, amin'ny maha olo-mainty ahy.
Zakaiko avokoa ireo vokany!!